Kooxda Jwxo-shiil, oo ka Bilowday Xeryaha Qaxootiga ee Bariga Afrika Olole – Rasaasa News
Jul 26, 2010 Kooxda Jwxo-shiil, oo ka Bilowday Xeryaha Qaxootiga ee Bariga Afrika Olole
Garrissa – [rasaas], waraka ka imanaya Dhadhaab, ayaa sheegaya in Kooxda Jwxo-shiil, oo ay Jawaano lacag ah u soo dhiibeen Eritrea iyo Siyaasiyiin Somaliyeed, ay isku dayayaan in ay ku soo jiitaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee ku darxumaysan xeryaha Qaxootiga ee dalka Kenya. Ololahan oo ay Eritrea iyo ururada diimeed ee Somaliya ku taageerayaan Janaraal Jwxo-shiil, laggana soo horjeedo wadhadalada nabada ee u dhaxeeya ururka ONLF iyo Itobiya.
Qoraal aan helay oo ay ku jiraan qodobadii wadahalka nnabada ee u dhaxeeyey ururka ONLF iyo Itobiya, ayaa waxaa ka mid ahaa Qodob si gaar ah u taabanay dadka qaxootiga ah ee Somalida Ogadeeniya meelwalba oo ay joogaan, gaar ahaana kuwa ku jira xeryaha qaxootiga ee dalalka dariska.
Qodobkaasi waxaa uu leeyahay sidan “dadka qaxootiga ah waa in dalkooda lagu soo celiyaa cidii doonaysa iyada oo lala kaashanayo UNHCR, iyada oo la raacayo xeerarka qaxootiyada dalalkooda loogu celiyo, sida; in dalkooda looga sameeyo nolol ka wanaagsan mida qaxootinimada ay ku haystaan.”
Iyada oo uu ruruka ONLF, siinayo mudnaanta 1aad, dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee Qaxootiga ah, ayaa dhinaca kale waxaa xiligan bilaabay olole Kooxda Jwxo-shiil. Ololahaas oo la doonayo in ciidamo laggaga uruuriyo xeryaha Qaxootiga, lana geeyo xamar.
Kooxda Jwxo-shiil, waxay qorshaynaysaa in wiilasha yar yarka ah iyo xabad xabadii u hadhay qoysaska Qaxootiga in ay ku soo abaabulaan, shilimaad ay dhimasho dabo socoto, oo ay bixiyeen dad jecel baa,ba ummada Somalida Ogadeeniya [beesha ogadeen].
Lacagahan ayay wada jir u binxinayaan Sheekh Daahir Aways, oo ay beeshiisu u dagaalamayso in ay mar uun xukunto dalka Somaliya iyo Eritrea oo iyadu doonaysa in ay wiilka Ogadeen ku waxyeelayso Itobiya. Arintaa waa in ay ka digtoonaadaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee ku jira xeryaha Qaxootiga ee Kenya.
Dhalinyarada la rabo in Xamar lagu tababaro [kala badh ku dhintaan], ka dibna qori loogu dhiibo Ogadeeniya si ay u waxyeeleeyaan dadkooda, wiilashaas kuma jir doonaan cid aan Ogadeen ahayn, dadka lacagaha loo soo dhiibay ee doonaya in ay qoraan dhalinyarada Ogadeenk ah, iyaga laftigoodu waa dad Ogadeen ah oo ay garashadu ka maqan tahay.
Lacagahan ayaa waxaa loo soo dhiibay ninka la yidhaahdo Cabdala Af Waranle, oo fadhigiisu yahay DUBAI, kana mid ah raga maalgaliya Jwxo-shiil, lehna wajiyo badan. Ninkaas ayaa waa dhawayto waxaa uu tagay Itobiya isaga oo leh Jwxo-shiil, oo nabad doon ah ayaa i soo diray.
Arimaha abaabulka ah waxaa wada afar nin oo ka tirsan kooxda Jwxo-shiil ee [kadeedka Ogadeen] oo kala ah; Nuur Faatule, Cali Dheer, Cabdi Cabdulahi iyo nin magaciisa lagu soo koobay Amaadin.
Ololahan, ayaa waxaa laggaga hortagayaa wadahadalka Nabada ee uu ururka ONLF kula jiro dawlada Itobiya. Waxaana qayb ka ah Eritrea iyo ururada Diimeed ee ka dagaalama dalka Somaliya.